Lasa Mamokatra Baiboly Misy Fonony Mafy koa i Japon
Pirinty sy Fanontana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Grika Géorgien Haoussa Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tarasque Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Umbundu Valencienne Xhosa Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal
Baiboly avy any Japon
Nasiana fitaovana vaovao fanakambanam-boky any amin’ny fanaovana pirintin’ny Vavolombelon’i Jehovah any Ebina, any Japon, mba hamokarana Baiboly misy fonony mafy sy misy ranom-bolamena.
Nisy ihany ny fanahiana tamin’ny voalohany, satria tapaka matetika ny jiro, vokatr’ilay horohoron-tany sy tsunami tany Japon tamin’ny 11 Martsa 2011.
Natomboka ihany anefa ilay tetikasa tamin’ny Septambra 2011. Telo volana latsaka taorian’izay, dia nivoaka ny Baiboly Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao amin’ny teny sinoa.
Efajato metatra eo ho eo ny halavan’ilay milina fanakambanam-boky. Io milina io no manambatra an’ireo taratasy efa vita pirinty, mametaka ny fonony, manindry azy, mampifanaingina azy, ary mampiditra azy anaty baoritra. Hidin’ilay milina avy eo ny baoritra ary alahany eo amin’ny takela-kazo hibatana azy.
Ahitam-bokatra ny fiaraha-miasa
Mila fandaminana sy fikarakarana mialoha ilay tetikasa. Tsy maintsy natao anaty vata sy nampidirina anaty kaontenera 34, ohatra, ireo fitaovana fanakambanam-boky, ary nalefa avy tany Eoropa nankany Japon.
Olona folo avy any amin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Etazonia no nankany Japon mba hanampy amin’ny fanatanterahana an’ilay tetikasa. Nisy tamin’izy ireo nijanona tany enim-bolana mba hampianatra ny fomba fampiasana sy fikojakojana an’ireo fitaovana.
Nahaliana an’ireo orinasa mpanao pirinty any Japon ilay milina vaovao, ka olona 100 mahery no tonga nitsidika an’ilay toerana, tamin’ny 19 Martsa 2012. Nitolagaga izy ireo.
Nizarana Baiboly Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao novokarin’ilay milina ny mpitsidika, taorian’ny fitsidihana. Nomena iray avy izy ireo.
Ny biraon’ny sampanay any Japon sy Etazonia ary Brezila izao no mamokatra ny Baiboly misy fonony mafy ho an’ny Vavolombelon’i Jehovah.
‘Ho mafy be amiko izao ny hanao ny asa manaraka’
Nahafinaritra an’ireo Vavolombelona sy ireo avy any amin’ny orinasa hafa ny niara-niasa nanatanteraka an’ilay tetikasa. Hoy ny lehilahy iray tsy Vavolombelona: “ Hoatran’ny hoe fianakaviako mihitsy ianareo. ”
Hoy koa ny lehilahy iray tsy Vavolombelona tamin’ilay andro farany niarahan’izy ireo niasa: ‘Ho mafy be amiko izao ny hanao an’izay asa tsy maintsy ataoko manaraka satria tsy hahafinaritra be hoatran’ny tato aminareo! ’
Fanaovam-pirinty Maneran-tany: Manampy Olona Hahalala An’Andriamanitra
Misy 15 ny toerana fanaovam-pirintin’ny Vavolombelon’i Jehovah maneran-tany. Mamoaka boky ara-baiboly amin’ny fiteny 700 izy ireo.
Video: Afa-po Ireo Mila Baiboly